Silk Dhinda Scarf Vatengi uye fekitori - China Silk Dhinda Scarf Vagadziri
fashoni dhizaina yeganda sirika scrarf
Kana iwe ukaisa pachirafu, zvakapfava uye zvakapfava zvekutarisira ganda, rega unzwe kugadzikana zuva rese. 100% Silk Yakatumirwa Saizi: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, mativi, saizi size.Size sangana nemutengi chikumbiro. Chinyorwa: 100% mulberry sirika, yakajeka satin, 12mm, 14mm, 16mm, kurema uremu, nyoro, kugadzikana kusangana neganda. Dhizaini: Yakasiyana dhizaini dhizaini uye yakanyatso kudhindwa mapateni (single-mativi kudhinda), ane mavara akanaka, akaisvonaka mapatani. Chipo bhokisi kurongedza. Inokodzera: Square bandana ...
Vakadzi logo sikweya sikira
Mufashoni dhizaini sirika chirafu shawl
Vakadzi dhijitari yekudhinda sirika chirafu
Screen yekudhinda silika sikafu
Yakasarudzika dhizaini sirika sikafu
Yakasarudzika fashoni chirafu shawl
Kugadzira mativi sirika jira
Yakareba sirika chirafu shawl